Faransiiska Oo Meelmariyay Shuruuc Adag Oo Dhanka Soogalootiga ah • Oodweynenews.com Oodweyne News
Baarlamaanka dalka Faransiiska ayaa meelmariyay shuruuc dhanka socdaalka ah oo sii adkaynaya xeerarka lagu hago dadka soo galootiga ah. Sharcigan ayaa soo gaabinaya wakhtiga kama dambaysta ah ee la qabto codsiyada dadka magangalyo doonka ah, wuxuuna labo jibaarayaa wakhtiga xabsiyada lagu haynkaro dadka sida sharci darrada ah ku gala Faransiiska.
Shuruucdan cusub waxaa sidoo kale ka mid ah hal sano oo xabsiga la dhigi doono dadka sida sharci darrada ah ku gala Faransiiska. Xisbiga madaxweyne Emmanuel Macron ee siyaasaddiisu dhexdhexaadka tahay ayaa sheegay in sharcigan cusub uu wax ka tari doono qaabka loo maro codsiga magangalyada.
Laakiin mucaaradka iyo qolyaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in xeerkaas lagu kalaxtagay. Sharcigan waxaa ogolaaday 228 xildhibaan, waxaana ka soo horjeedsaday 139, waxaana codaynta ka baaqsaday 24 xildhibaan.